War culus: Qaabkii Xasan Sheekh Soomalida looga horwareejin lahaa oo looga arinsanayo Hotel Saxafi | Markacadey.com
War culus: Qaabkii Xasan Sheekh Soomalida looga horwareejin lahaa oo looga arinsanayo Hotel Saxafi
In kabadan 100 xildhibaan ayaa hadda shir ay uga soo horjeedaan siyaasada Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu uga socdaa Hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in siyaasad-xumida uu Xasan Sheekh dalka ku hogaaminayo ay gaartay heer aan indhaha laga qarsan karin, ayna ka arinsanayaan sida ugu wanaagsan ee ay uga jawaabayaan arintaas.
Qaar ka mid ah xildhibaanadan ayaa u sheegay saxaafada in Xasan Sheekh iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen arimaha gudaha sida dhinaca ammaanka oo faraha ka baxay iyo dhinaca arimaha dibadda ayna tahay in uu bulshada soo maaliyeed ka hor wareego.
Saxaafada ayaa banaanka ka joogta kulankaas, oo loo diiday in ay goob joog ka ahaadaan, waxaase lagu wargeliyay in marka uu soo idlaado warmurtiyeedka kulanka loo akhrin doono.
Kulan lagu waday in maanta xubnaha baarlamaanka ay isugu yimaadaan xarunta Baarlamaanka ayaa baaqday, kadib markii xildhibaano badan ay soo aadeen kulanka Hotel Saxafi.
Kulanka xildhibaanadan ayaa yimid iyadoo maalintii shalay ahayd ay soo baxeen warar sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay Xasan Sheekh iyo madaxda dalka Ethiopia, iyadoo horay uu aad u xumaa xiriirka Kenya iyo Kooxda Xasan Sheekh, taas oo keentay in Magaalada Nairobi lagu xiro Qunsulkii safaarada Soomaliya ee Kenya.